म रूपमती !
२०७८ असार १२ गते
मेरो नाउँ रूपमती नेपाली । तपाईंले पढ्दै गरेको कथा मेरो । नेपाल छँदा मेरो नाउँथर जे भएपनि यता आएदेखि नेपाली मात्रै भनी चिनिनँ पाउँदा खुसी छु । अनि यो रूपमती नाउँ त मैले आफैं जुराएर दिएकी हुँ मेरो कथाका लेखकलाई ।
उता मेरो चिनारी थियो- कलसीकुमारी पाइजा । कलसीकुमारी त मेरो न्वारनको नाउँ पो । सोध्यो भने सायद मेरै बाआमालाई थाहा थिएन होला त्यो नाउँ । नौ वर्षकी भएपछि गाउँभन्दा डेढ घन्टा टाढाको प्राथमिक स्कूल पनि जाने सौभाग्य पाएकी हुँ मैले । त्यहाँ पनि मलाई कलसीकुमारी भनेर कम तर रत्नेचौरकी पाइजा मगरकै छोरी भनी चिन्नेहरू ज्यादा थिए । साथीहरूमाझ कान्छी नाउँमै लोकप्रिय थिएँ । घरकी कान्छी छोरी म सबैकी कान्छी भएँ ।
‘छोरी सानै छ‚ पढ्न रहर गरेकी छ । हक तिम्रै हो, अहिल्यै केही नगरिदिए है भान्जा !’ भनेकी त हुन् आमाले‚ तर किन मान्यो र त्यो डम्बरेले । आफ्नो त संस्कारैले मामाकी छोरीमाथि फुपूका छोराको हक लाग्ने; भर्खर पन्ध्र कटेकी थिएँ‚ साथीहरूसित तातोपानी मेला भर्न गएका बेला माइली फुपूका छोराले तानेर स्वास्नी तुल्यायो । र मेरो परिचयमा थपियो; डम्बरबहादुरकी स्वास्नी । १७ वर्षै नपुगी म छोराकी आमा बनेँ र अर्को परिचय प्राप्त गरेँ- मौसमकी आमा ।
धन्यवाद लेखक तिमीलाई । तिमीले मेरो उतारचढावले भरिएको जिन्दगीको लामो कथा सुनेर दुनियाँलाई सुनाउने आँट गर्यौ र आज यो कथा साइप्रस आउने हजारौं नेपाली अझ भनौं दक्षिण र दक्षिणपूर्वी एशियाली दिदीबहिनीको साझा कथा भएको छ । कसैले भन्न सक्ला‚ ‘रूपमती तिम्रो कथामा अहँ पटक्कै भेटिनँ मैले आफूलाई ।’ यसो भन्ने रूपमतीहरूलाई म रूपमती सल्यूट टक्र्याउनेछु‚ भन्नेछु ‘तिमी रूपमती भाग्यमानी रहिछ्यौ ।’
बजार भर्न गएका बेला गाडीमोटरले हर्न बजाएको सुन्दासमेत तर्सेर तीन हात पर भाग्ने म कतार एयरवेजको बडेमानको जहाज चढेर दोहा हुँदै साइप्रसको लार्नाका विमानस्थलमा ओर्लिएकी थिएँ । चमकधमकले आँखै बिझाउने‚ मनभरी कुतुहल र उत्सुकतै उत्सुकता । यताको विमानस्थलमा हामीलाई लिन स्थानीय सिप्रोट एजेन्ट आएको थियो ।
आफ्नो कथा यो कथाकारलाई सुनाउन थालेदेखि म बेहोशी-बेहोशीजस्ती भएकी छु । मसँग भएका वार्तालापलाई जब ऊ कथाको खेस्रा बनाएर फेरि मैलाई सुनाउँछ म त्यसमा मेरा भोगाइहरूको क्रम नमिलेको पाउँछु । त्यसमाथि यो कथाकारले मैले बह पोखीपोखी भन्न चाहेको कथालाई सरसर अघि बढाइदिएको मात्रै छ र मैले जे कुरालाई उल्लेखमात्रै गर्न चाहेकी हुन्छु ती कुराको यति शुक्ष्म विष्लेषण गरिदिएको छ कि म आफैं लाजले मुख छोप्छु र आफैंसित भाग्न खोज्छु । तर हामी दुवै स्वार्थप्रेरित छौं‚ मलाई मेरो कथा सुनाउनु छ र उसलाई मेरो कथा बिकाउ बनाउनु छ । ‘एकालाप’मा मेरो कथा नसुनाउ भनी मैले बिन्तीभाउ गरेकै हुँ तर उसले माने पो । भन्छ- ‘रूपमती तिम्रो कथा यसरी नै भनेको सुहाउँछ ।’ त्यसैले अब मैले मेरो कथा लेखकसँग बहस नगर्ने बाचा गरेकी छु । अघिल्लो राति अबेर भएको भर्च्यूअल कुराकानीलाई उसले कथामा यसरी उनेको रहेछ :-
भोलिपल्टै मलाई लिन बडेमानको ज्यान भएको, दारीकपाल जम्मै फुलेको झन्डै साठी वर्षको बूढो सिप्रोट आयो । उसले अङ्ग्रेजी भाषामा थुप्रै कुराहरू मसित सोध्यो । ट्वाँ परेर दोभाषेतिर हेर्नु मेरो नियति थियो । मैले स्याहार्नुपर्ने बूढी हजुरआमैलाई रहेछ । उतिबेला तिनी ८७ वर्षकी थिइन्, मैले स्याहार्दास्याहार्दै ९४ लागिन् । पहिले श्रीलङ्काली केटीले स्याहासुसार गर्ने ती सिप्रोट बोजु (जसलाई यिनीहरूको भाषामा ‘याया’ भनिन्छ) अब मेरो जिम्मा लागेकी थिइन् ।
आमाबाउ र हुर्केका छोराछोरी यसरी झन्डै नाङ्गिएर समुद्रमा डुलेको कति मन पर्देन मलाई । मैले मन नपराएर के नै हुन्छ र ? यहाँ यस्तै संस्कृति छ क्यारे !
मैले जान्ने अङ्ग्रेजीको हाइहेल्लो यहाँ काम लागेन । ग्रीक पनि भाषा हुनेरहेछ भन्ने त यही आएर थाहा पाएकी । पहिलेपहिले याया बूढीले भन्न खोजेको कुरो नबुझेर खुबै दुख पाएँ । तर, यी आन्द्रीयानी याया पनि मेरै फुपूजस्तै मनकारी रहिछन् । कुरो नबुझेर मैले जति काम बिगारे पनि कहिल्यै रिसाइनन् बरु मलाई (गोरीमु र मानोमु-छोरी र पियारी) भनिरहिन् । मलाई होल्डिङ सेन्टरमा लिन आउनेसहित बूढीका तीन भाइ छोरा र दुईटी छोरी रहेछन् तर सबै यूकेमा बस्दा रहेछन्; चाडबाडमा मात्रै साइप्रस आउने । बूढा उहिल्यै मरेका अरे उत्तरी साइप्रसमा टर्कीले बलजफ्ती सेना पठाएर कब्जा गरेको बेलामा भएको सङ्ग्रामका बखत । याया मलाई सुनाइरहन्छिन् बलपूर्क शत्रुदेशले आफ्नो सानो टापुको आधा हिस्सा कब्जा गरिराखेको र लोग्ने गुमाउनु परेको कथा, बूढा आँखाका खोपिल्टाबाट आँसुका ढिक्का खसाल्दै ।
मलाई लिन आउने ओडियास बूढो मात्रै निकोसियामा बस्ने रहेछ । तर, आफ्नी आमा आन्द्रीयानीसित होइन‚ अलग्गै । पछि थाहा पाएँ ओडियासले तेस्री श्रीमतीसित पनि सम्बन्धविच्छेद गरिसकेको रहेछ । उसका हुर्किसकेका छोराछोरी र नातिनातिनी रहेछन् । हरेक शनिवार ऊ आमालाई भेट्न आउँथ्यो र एकरात त्यहीँ बसेर जान्थ्यो । एक शनिवार ओडियास आमा भेट्न आएको थियो । बूढीलाई अलिक बिसन्चो पनि थियो । सुङ्गुरको कमलो मासुमा मरिच हालेको सुप बनाएर खुवाएपछि तिनी छिट्टै निदाइन् । म पनि ‘कालिनिक्ता मास्त्रो (शुभरात्री मालिक)’ भन्दै मूलघरभन्दा बाहिर मेरो निम्ति अलग्याइएको निजघरमा जान उठेँ । ‘तँलाई केही असुविधा त छैन नि’ भन्दै ओडियास मेरो पछि लाग्यो । यतिन्जेलमा म ग्रीक राम्रै ठम्याउने भइसकेकी थिएँ । ऊ कुरा गर्दै मसित आयो र सँगै छाप्रोभित्र पस्यो । केही बिग्रिएका सामानहरू बनाइदियो र एक्कासी मलाई च्याप्प समायो । मैले प्रतिकार गर्नुअघि नै विनित भावमा याचना गर्दै झ्याप्पै यसरी चुम्बन गरिदियो कि म एकैचोटी लल्याकलुलुक भएँ जुन डम्बरेले कहिल्यै गरेको थिएन । मेरा छोराका बाउले चुम्बनका नाउँमा मेरा ओठसम्मन् मुस्किलले छोएको हुँदो हो ।
यसरी म रूपमती बनेँ ।
अब ओडियास सातामा दुईचोटिसमेत आउन थालेको थियो । सरकारी सिभिल इन्जिनियरबाट सेवानिवृत्त भइसकेको उ कन्सल्ट्यान्टको काम भने गर्दै थियो । ऊ मेरो अस्मिता लुट्दैनथ्यो मात्रै बरु नेपालमा मेरो पारिवारिक स्थिति‚ मेरा छोराछोरी‚ सौता र श्रीमानकाे बारेमा पनि चासो राख्थ्यो । हाम्रो देशको सामाजिक‚ आर्थिक र राजनीतिक अवस्थामासमेत उसको चासो हुन्थ्यो । म अदनाले के बयान गर्न सक्थें र ? विस्तारै ओडियासले मलाई आर्थिक सहयोग पनि गर्न थाल्यो । महिनाभरी आन्द्रीयानी मायालाई स्याहारेको ज्यालामा करकट्टि गरेर म चानचुन तीनसय पन्ध्र युरोजति हात पार्थें । तर, त्योभन्दा धेरै त ओडियासले महिनैपिच्छे दिन्थ्यो ।
के म पनि आफूले देखे सुनेका दिदीबहिनीहरूकै पथ पछ्याइरहेकी थिएँ त ? आफ्नो सुगरड्याडीबाट युरो झार्ने र आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड भनाउँदो अन्य कुनै पञ्जाबी‚ पाकिस्तानी वा नेपाली केटाको खाँचो पूरा गरिदिने ? म अरु नेपाली दिदीबहिनीले यसरी नाठो राखेको बारेमा सुन्थेँ र जिब्रो टोक्थेँ तर आज यो रूपमती पनि त्यही पतनको खाँडलमा भासिएकी थिई ।
ओडियासमा म आफ्नो लोग्नेको वास्तविक रूप देख्थें । लोग्ने मात्रै किन बिस्तारै म त उसलाई बाबुभन्दा बढ्ता ठान्न थालें । मेरो करारनामामा मैले हरेक महिनाको अन्तिम आइतबार मात्रै बिदा पाउने, सिप्रोट कानूनमा उल्लिखित सार्वजनिक बिदाका दिनहरूमा समेत काम गर्नुपर्ने र यसबापत् अतिरिक्त रकम पाउने भन्ने उल्लेख थियो । तर, ओडियास मसित लहसिन थालेपछि उसले मलाई हरेक आइतबार घरबाट बाहिर निस्कन स्वतन्त्र छोडिदियो । मात्र मैले बूढीमाउका खाँचाहरूलाई बेवास्ता गर्न पाउन्नथें । अनि मैले साइप्रसमा बस्ने नेपाली समुदायले उल्लासमय रूपले मनाउने तीज‚ दशैं‚ तिहार‚ उँधौलीउभौलीजस्ता नेपाली चाडहरूमा पनि घरबाहिर जान पाउन थालें ।
टीजीआई फ्राइडे रेष्टुरेन्टमा सन् २०१८ को तीजको दर खाई धुमधामसँग नाचेर फर्किँदा त हो मैले शेखर चुडाललाई भेटेको । क्यासलाइन अगाडि म ट्याक्सी कुरिरहेकी थिएँ । मैले चिनेको ट्याक्सीवाला निकोसिया बाहिर गएको रहेछ । अब के गर्नेहोला ? ढिलो भयो भने बुढीमाउ अत्तालिन्छिन् भन्दै हडबडाइरहेकी थिएँ । बीस एक्काईस वर्षे नेपाली ठिटो मेरो नजिक आयो र सोध्यो- ‘आन्टीलाई कहाँ जानुपर्ने ?’ मैले ‘लाकातामिया’ भनेपछि ‘होर ? म पनि लाकातामिया मै बस्छु, तर म त बसमा जाने । तपाईं जाने हो भने एकजना चिनेको पञ्जाबीको ट्याक्सी छ त्यसलाई भनिदिन्छु’ भन्यो । ‘बोलाऊ न त‚ म तिमीलाई पनि लिएर जाउँला ।’ मैले यति भनेपछि उसले मेरै मोबाइलबाट ट्याक्सीवाला पञ्जाबीलाई क्यासलाइन अगाडि आउन भन्यो । तर ट्याक्सीवालाले उसलाई सोलोमस स्क्वायरभन्दा उत्तरपट्टिको ‘पेरिप्तेरो’ (चौबीसै घन्टा खुला रहने पसल) अगाडि आउन भनेछ । शेखरले ‘आन्टी त्यहाँ गएर उभिनुस् म बसमा जाम्चु’ भन्यो । मैले नै कर गरेर उसलाई आफ्नो साथ लगाएँ । ट्याक्सीमा बसिसकेर पनि शेखर‚ ‘आन्टीले बेकार दुःख गर्नुभो म बसमा गैहाल्थें नि’ भन्दैथियो । तीजको दर खान भनेर म आफ्नो परम्परागत मगर पहिरन गुन्यु‚ चोली र घलेकमा सजिएर टीजीआई फ्राइडे पुगेकी थिएँ । मेरो सुन्दरता र परिहनको खुबै प्रशंसा गर्यो उसले ।
ओडियासले मलाई पनि भएका लुगा फुकालेर नाङ्गै हिँडम् भन्ने प्रस्ताव गर्यो । मलाई भाउन्न छुट्यो । म केही नबोली फनक्क फर्किएँ । लाचार भएर ऊ पनि ‘सिग्नोमी (माफ गर)’ भन्दै मेरा पछि लाग्यो !
बाटाभरी शेखरले विद्यार्थी भिसामा साइप्रस आउने नेपाली केटाहरूका दुःखका कथा सुनायो । मेरो हृदय दयाले भरियो । ओडियास काम विशेषले ग्रिसको थेसलोनिके शहर गएको थियो । त्यसैले मैले उसलाई आफू काम गर्ने घरमा लिएर गए पनि कुनै समस्या थिएन । एक छाक भए पनि मिठो मसिनो खाओस् न त भनेर मैले उसलाई आफ्नामा लिएर गएँ । पहिले त उसले नाइँनास्ती गरेजस्तो गर्यो तर पछि ‘हुन्छ’ भन्यो । बाटामा ट्याक्सी रोक्न लगाएर मैले अलिकति सुङ्गुरको मासु किनें । घरमा नेपालबाटै मगाएको रायोको बीउ खुबै मिहिनेत गरी फलाएकी थिएँ, त्यसमै सुङ्गुरको मासु मिसाएर पकाइ खुवाउँछु भन्ने मनमा आयो । मैले गुन्द्रुक र भटमास पनि साँधेँ र मासमुसुरोको दाल मिसाएर पकाएँ अनि रायोको सागमा सुङ्गुरको मासु मिसाएको परिकार त छँदै थियो । मसिनो चामलको भातसित त्यो परिकार शेखरले खुबै मिठो मानेर खायो र भन्यो‚ ‘आन्टी‚ हामी त बङ्गलादेशीको पसलबाट १८ युरोमा २० केजी आउने कनिका चामल किनेर खान्छौं सस्तो पर्छ भनेर, तर त्यो गिलो भात मलाई मनै पर्दैन ।’ केहीबेर कुरा गरेर शेखर उसको फ्ल्याटमा गयो । म बस्ने ठाउँबाट पाँचसात मिनेटकै दूरीमा रहेछ ऊ बस्ने फ्ल्याट ।
थेसलोनिकेबाट फर्केर ओडियासले मलाई यस वर्ष पनि पिसौरी बिच लैजाने भयो । यी वर्षहरूमा उसले मलाई साइप्रसका सबै प्रख्यात बिचहरूमा घुमाइसकेको थियो । अगस्टको ज्यानमारा गर्मी छल्न एकदिन भए पनि पिसौरी जान पाइने भयो भनेर म मख्ख परें र हतपत्त यो कुरा शेखरलाई सुनाएँ । अस्ति नै छुट्टिनेबेलामा उसले र मैले फेसबूक आइडी र मोबाइल नम्बर साटासाट गरिसकेका थियौँ । उसले‚ ‘साँझ फर्केर बिचमा मस्ती गरेका फोटाहरू इनबस्क गर्नु है आन्टी ।’ भन्यो र‚ ‘कोसित जान लागेको’ भनेर पनि सोधिहाल्यो । मैले साथीहरूसित भनेर ढाँटें ।
लिमासोल र पाफोस शहरको ठीक्क बीच्चतिर पर्ने पिसौरी बिचमा मानिसहरूको यति घुइँचो थियो कि एकले अर्कालाई धक्याउँदै हिँड्नुपर्ने । यतिका वर्ष भइसके बिचमा आउन थालेको तर हरेकचोटि नाङ्गेभुतुङ्गे मानिसहरू देखेर तीनछक्क परेर मुख छोप्नु मेरो विशेषता नै भइसक्यो । मेरो यही व्यवहार ओडियासलाई मनपर्छ सायद र ऊ मलाई जिस्काउँछ । भ्यागुतो फुलेजस्ता भुँडीमा टुपिस लगाएका आइमाईहरू देखेर मलाई हाँसोभन्दा ज्यादा केही उठ्दैन । यस्ता लुगा लगाउने पनि त एउटा उमेर हुँदो रहेछ नि ! त्यसमाथि आमाबाउ र हुर्केका छोराछोरी यसरी झन्डै नाङ्गिएर समुद्रमा डुलेको कति मन पर्देन मलाई । मैले मन नपराएर के नै हुन्छ र ? यहाँ यस्तै संस्कृति छ क्यारे ! ओडियास मलाई भिडभन्दा परपर पूर्वैपूर्व हिँडौं भन्छ । समुद्र छेउको नौनीजस्तै कोमल बालुवामा नाङ्गो खुट्टा हिँडिरहँदा म रत्नेचौरको मेरो गाउँमा भीरपाखा गर्दाताकाका दिनहरू सम्झिरहन्छु । तर त्यसमै हराउने फुर्सत मलाई कहाँ छ र ? म त आज ओडियासलाई समुद्रकिनारको मस्ती दिन आएकी । मैले आफ्ना लागिभन्दा उसका लागि सोच्नु छ । ऊ मलाई निकै पर लैजान्छ । मानिसहरूको भिड पातलिन्छ । एउटा पहरोजस्तो ढुङ्गो चढेर ओडियास मलाई पारि जाऊँ भन्छ जहाँबाट समुद्र कोखे परेर भित्र पसेको छ र नुनिला चट्टानहरू माथिमाथि निकै अग्लो पर्दे गएका छन् । म त हिमालकी छोरी, झिमिक्क नगर्दै पहरोको माथि पुगिसक्छु तर बिचरो ओडियास तल फेदैमा बामे सर्दै हुन्छ र म फेरि तल ओर्लिन्छु र उसलाई माथि उक्लिन सहायता गर्छु । प्रशंसामा ऊ भन्छ- ‘तँ त एभरेस्टकी छोरी, तँलाई त यी साना थुम्का थुम्की के नै लाग्दा हुन् र ?’ प्रतिउत्तरमा म हाँसिदिन्छु मात्रै दमले फुलेको ओडियासलाई सम्हाल्दै ।
मेरी आम्मै ! पहरो पारी त बिचित्र रैछ । देखेजति सबै सर्वाङ्ग नाङ्गा । म लाजले मुख छोप्छु र फर्किन भनेर पछाडि दगुर्छु । ओडियास भन्छ- ‘तँ फर्किस् भने म एक्लै पहरो काट्न सक्दिनँ । नदेख्नु देखिसकिस् अझै परतिर जाम, यहाँ अरु केके देख्न पाइन्छ ।’
म्याग्दीको अनकन्टारमा जन्मिएकी म बिचरीलाई मानव यौनिकताको वर्गीकरण गर्न कसरी आउँछ र तर पनि त्यहाँको विकृति देखेका आधारमा भन्छु मैले त्यहाँ होमोसेक्सुअल‚ बाइसेक्सुअल अनि हेटेरोसेक्सुअल सबैखाले मानिसहरूलाई देखेँ; खुला यौनचारमा रत भएका । कोही रमिते‚ कोही रतिक्रियामा मस्त । तर कसैलाई भने यी सबै उदेकलाग्दा दृष्यहरूले नछोएजस्तो सर्वाङ्ग नाङ्गिएर लमतन्त अजिङ्गर पसारिएजस्तो बालुवामा पस्रिएर आकास हेरिरहेका अनि कोहीचाहिँ नाङ्गो ढाडमा ब्यागप्याक बोकेर हातमा जुत्ता हल्लाउँदै हिँडिरहेका; आसपासको त्यो विकृतिलाई नदेखेझैं गरी । ओडियासले मलाई पनि भएका लुगा फुकालेर नाङ्गै हिँडम् भन्ने प्रस्ताव गर्यो । मलाई भाउन्न छुट्यो । म केही नबोली फनक्क फर्किएँ । लाचार भएर ऊ पनि ‘सिग्नोमी (माफ गर)’ भन्दै मेरा पछि लाग्यो । त्यस रातभरि मलाई उही पिसौरी बिचको पहरोपारिको दृष्यले झस्काइरह्यो । भूत लागेजस्तो भयो । ‘यस्तो पनि हुनी रै’छ ?’ भन्ने कुराले म एकदमै बेचैन भएँ र ‘मलाई समुद्रको मनुवा लागेको हो कि एउटा भाले देउरालीलाई चढाइदिनू’ भनी घरमा खबर गरें । रातैभरि झसङ्ग झसङ्ग भइरह्यो । शेखरले फोटा हाल्नुस् कि हाल्नुस् भनेर हैरान खेलायो । पोहरपोहरका फोटा पठाइदिएर उसको चित्त बुझाएँ ।
अचेल डम्बरे दुबईमा काम गर्छ । दुबईमा पनि उसले अर्कै स्वास्नी राखेको छ अरे । मैले त पत्याएकी थिइनँ । एकदिन सौताले रूँदै र हारगुहार माग्दै फोन गरेकी थिई त्यसपछि त पत्याउनै पर्यो । ‘तँ ममाथि सौता पस्न आउँदा यो सोचिनस्’ भनी मुखभरीको गाली दिन मन लागेको थियो । तर, मैले केही भनिनँ बरु रोइदिएँ ऊसितै । ​‘कमाउन सकेछु भने तँलाई पनि हेरूँला । मेरा अल्लारे छोराछोरीहरू बिचल्लीमा परे । तँ पनि आखिर कान्छीआमा भए पनि आमै होस् । तिनीहरूलाई बिग्रिन नदिएस् । सकेको म हेरूँला’ भनेर सौतालाई सान्त्वना दिएँ । र फेरि हामी सौतासौता मुटु फुट्ने गरी सँगै रोयौं । यो नियतिको कस्तो खटन हो जसको हेला सहन नसकेर म‚ ‘यसको मुख जिन्दगीमा हेर्नुनपरोस्’ भनेर विदेश भासिएकी थिएँ । आज उसैले मसित सहायताको भीख मागिरहेकी थिइ । डम्बरे अब म र मेरी सौता दुवैको साझा शत्रु भएको थियो ।
पोहरपोहर बिचतिर जाँदा ममात्रै होइन रहिछु ओडियासहरूकी रूपमती‚ यहाँ हाउसमेड भिसामा आउने हजारौं दक्षिण एशियाली नारीहरूले ओडियासजस्ता बाबुबाजेको उमेरका पिपासुहरूको रूपमती बनिदिनुपर्ने बाध्यता रहेछ भनेर चित्त बुझाउँथें । तर यसपालि त मैले खुला यौनको एउटा विभत्स अराजकता देखें । जे देखेँ त्यसबाट बाहिर निस्कन मलाई धेरै समय लाग्यो । तर यही बीचमा शेखरसित मेरो निकटता नजानिँदो तरिकाले बढिरहेको थियो । ऊ अब मसित यति खुल्न थालेको थियो कि आन्टीबाट ‘सुड्डी आन्टी’ को सम्बोधनमा ओर्लिएको थियो । खर्च छैन भन्थ्यो र म उसलाई पकेटमनी दिन पाउँदा आनन्द मान्थें । उसमा सायद आफ्नै छोराको रूप देख्थेँ र मगरको वीर्य नहुँदो हो त मेरा छोराका पनि अहिलेसम्म यस्तै दारीजुँगा पलाइसक्थे होला भनी सोच्थेँ । ओडियास आउनेबाहेकका दिनहरूमा शेखरलाई मेरोमा आउन मैले स्वतन्त्र छोडिदिएकी थिएँ । ऊ अनेक बहानामा मसित टाँस्सिन र छुन खोज्थ्यो । “तिमी त बच्चा हौ बाबु‚ आन्टीसँग पनि यस्तो गर्छन्” भन्दै म उसलाई झड्कारेर धकेल्थेँ । एकदिन बिरामी परेको बहाना पारेर ऊ मेरै छाप्रोमा सुत्न खोज्यो । मैले स्वाभाविक रूपमा लिएँ र उसको सक्दो सेवा गरेँ । आफूभन्दा १७ वर्ष कान्छो अनि मेरो छोराभन्दा मात्रै तीनचार वर्षले जेठो ठिटोले ममाथि पुरुषत्वको झन्डा गाड्यो त्यस रात र यसरी म शेखर चुडालकी पनि रूपमती बनेँ । के म पनि आफूले देखे सुनेका दिदीबहिनीहरूकै पथ पछ्याइरहेकी थिएँ त ? आफ्नो सुगरड्याडीबाट युरो झार्ने र आफ्नो ब्वाइफ्रेन्ड भनाउँदो अन्य कुनै पञ्जाबी‚ पाकिस्तानी वा नेपाली केटाको खाँचो पूरा गरिदिने ? म अरु नेपाली दिदीबहिनीले यसरी नाठो राखेको बारेमा सुन्थेँ र जिब्रो टोक्थेँ तर आज यो रूपमती पनि त्यही पतनको खाँडलमा भासिएकी थिई ।
म रूपमती बन्ने पथमा त्यही दिनदेखि हिँडेकी रहिछु, जुनदिन मेरा बाध्यताले मलाई पासपोर्ट बनाउने चक्करमा सदरमुकाम बेनीबजारतिर धकेलेको थियो । परिचय किन खोलुँ र त्यस राक्षसको‚ मेरो कथाका लेखकलाई बाचा खुवाएकी छु त्यसलाई नचिनाऊ है भनी, नजिकको आफन्त हो । त्यही पिपासुले मलाई‚ ‘यसरी दुःख नकाट कान्छी बरु साइप्रस जाऊ । तिमीलाई छोराछोरी हुर्काउन सजिलो होला । जेठाले पनि अर्कै घरबार गरेर तिमीलाई बिचल्लीमा पार्यो । धेरै खर्च लाग्दैन । मात्र तीन चार लाखको कुरा हो ।’ भनी फकायो । फुपू अर्थात् सासुले पनि सहमति दिइन् र म पासपोर्ट बनाउन उसैका साथ लागी बेनीबजार झरेँ । अड्डाको काम त सबेरै सकिएको हो तर बजारमा कताकता के-के काम छ भनेर त्यसले मलाई दिनभरि घुमाइरह्यो । उसै त वर्षौंदेखि लोग्नेले नहेर्ने हुनाले मैले कोही लोग्ने मानिससित बोल्यो की घरकाले बात लगाउन सुरु गरिहाल्थे । धन्न फुपूले छोपेकी थिइन् र म टिकेकी थिएँ त्यस घरमा । अब भोलि घर पुग्दा मैले के-के सुन्नुपर्नी हो म ढुकढुक थिएँ । तर जे नहोस् भन्ने मेरो मनले प्रार्थना गरेको थियो त्यही ममाथि घट्न पुग्यो । त्यसले होटलमा राति बास बसालेर मेरो अस्मिता लुट्यो । लाजै नमानी‚ ‘जेठाले तिमीलाई नहेरेको वर्षौं भइसक्यो । कति मनका इच्छा मारेर बस्छ्यौ ?’ भन्दै ममाथि जाइलाग्यो । हल्ला गरे बेइजत होला भन्ने डरले म चुप रहन बाध्य भएँ । म घर नपुग्दै ममाथि प्रहार गर्न मेरा घरका मान्छेहरू तम्तैयार थिए । सबैभन्दा पहिले मेरी सौता जुरुकजुरुक फरिया उचाल्दै कराउन आइपुगी । तर त्यस दिन पनि मेरी फुपू देवी बनेर प्रकट भइन् र म उठिबास लाग्नबाट जोगिएँ । अहिले पनि म सोच्छु संसारमा धेरै नारी छन् तर मेरी फुपूजस्ती कोइ छैनन् ।
म साइप्रस आउन बाध्यतामा यही कारणले परेँ । जब मौसमले तीन वर्ष टेकेको थियो अनि म बीसमा हिँड्दै थिएँ । मौसमको बाउ मलेसियाबाट फर्किआयो र अर्की स्वास्नी घरमा हुल्यो । उतै छँदा फेसबूकमा चिनजान भएको अरे । नखरमाउली घरमा स्वास्नी छ भन्ने थाहा हुँदाहुँदै कसरी सौता पस्ने आँट गरेकी होली । माइतीलाई हारगुहार गरेँ तर मेरा माइती कमजोर थिए । फुपू अर्थात् मेरो लोग्नेकी आमाले‚ ‘भैगो कान्छी माफ गरिदे । तँ मेरा दाइकी छोरी अनि घरकी जेठी बुहारी म तँलाई हेला हुन दिन्नँ’ भनी अनेक तरहले सम्झाइबुझाइ गरिन् । बाले पनि‚ ‘मुद्दा मामिलामा जान हुन्न आफ्नै भान्जा त हो तँलाई हेला हुन किन दिम्ला र’ भने । म बिचरीको के लाग्थ्यो र । आँसु पिउँदै मैले सौताको अस्तित्व स्वीकार गरेँ ।
मेरो अस्तित्वको क्षयीकरण त्यही बिन्दुबाट शुरु भयो ।
सौता भित्रिएपछि मेरो स्थापित मान्यतामा ठूल्ठूला भूइँचालाहरू दिनैपिच्छे आउन थाले । बालाई भनेँ- ‘म माइतै बस्छु ।’ बाले भने‚ ‘तँ भान्जाकी सम्पत्ति होस् । यसरी माइत बसे बहिनीले के भन्छे ?’ यसै नहुनी उसै नहुनी फुपूलाई भनेँ‚ ‘कि मलाई मानाचामल दिएर अलग्याइदेऊ होइन भने छोरो र म यही म्याग्दी खोलामा हाम फालेर मर्दिन्छम् ।’ फुपूले मलाई बुझिन् । मौसमका बाको भागमा पर्ने हिस्साबाट हामी आमा छोरालाई भाग छुट्याइदिइन् पञ्च राखेर र हामी आमाछोरा त्यही बारीको ढिकमा बस्न थालिम् ।
कान्छी ल्याए पनि जेठी स्वास्नी भोग्ने इच्छा किन मर्थ्यो र लोग्नेको । जतिवटी स्वास्नी मानिसलाई ओछ्यान बनाए पनि यी लोग्ने मानिसहरूको भोग्ने लालसा मर्दैन कि क्या हो ? मायाको नाउँमा मलाई म पनि नगर्ने मेरो लोग्ने दुई तीन दिन बिराएर मलाई बलात्कार गर्न आइरहन्थ्यो । जब ऊ नकच्चरो अनुहार लगाएर कान्छीकहाँ पुग्थ्यो कान्छीले वाकबाण बजार्थी र फेरि लाज पचाएर कान्छीसँग सुत्थ्यो । यसरी नै उसले मलाई गर्भवती बनाइछोड्यो र आफू उड्यो फेरि मलेसियातिर । ऊ मलाई पटक्कै माया गर्दैनथ्यो । मन नपर्ने स्वास्नीले जन्माएकी छोराको पनि किन माया गर्थ्यो र मौसमलाई पनि मतलब गरेन । मैले छोरी जन्माएँ । पछि सौताले पनि छोराछोरी जन्माएपछि त हामीलाई पूरै बेवास्ता गर्यो । मैले तिनै दुई छोराछोरीको लालनपालन र मेलापातमा आफूलाई व्यस्त राखें र मेरो पनि लोग्ने थियो भन्ने कुरालाई भुल्ने कोसिस गरें ।
छोराछोरी हुर्कँदै गए । गाउँको स्वरूप फेरियो । मानिसका इच्छा आकांक्षाहरू बदलिए । नौलो मान्छे आयो भने आइमाई र केटाकेटी मात्रै हो र तन्नेरीहरूसमेत घरभित्र लुक्ने मेरो गाउँको रूप पनि कालक्रमले फेरियो । मेरै गाउँका कैयन् दिदी बहिनीहरू दुबई‚ कतार‚ इजरायल हुँदै साइप्रससम्म कामका लागि पुगे र लोग्नेमानिसहरूलाई कमाइजमाइमा टक्कर दिनथाले । उसो त हामी मगरहरूको धेरै मात्रामा मातृप्रधान संस्कृति छ । त्यसो नहुँदो हो त मेरो लोग्ने भनाउँदो डम्बरेको ज्यादतीबाट मेरी फुपूले मलाई कसरी रोक्न सक्दिहुन् र ? त्यसले त मलाई कतिचोटी बात लगायो लगायो र मोसो दलेर गाउँभरि डुलाउने धम्की दियो । भर, मेरो घरजहानमा मेरी फुपूको बोलबाला थियो अनि उनले त्यस पातकी डम्बरेको बहुलठ्ठीलाई कहिल्यै साथ दिइनन् र मलाई ती दीनहरू भोग्नुपरेन; सौताले जति फरिया उचाले पनि ।
छोराछोरीलाई मैले बोर्डिङ्ग स्कूलमा राख्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । सौताले छोराछोरी बोर्डिङ्ग हालेपछि के मैले मात्रै सरकारी स्कूल हाल्नु त ? छोराछोरी हुर्किसकेका थिए मैले तीसै कटेकी थिइनँ । एकमनले भन्थ्यो डम्बरेले अर्की ल्याएर त केही भएन भने मैले अर्को घरबार गर्दा के हुन्छ र ? फुपू छँदैछिन्‚ आखिर नातिनातिनी तिनका पनि हुन् क्यारे‚ म पोइल गएँ भने तिनले हेरिहाल्छिन् । हाम्रो संस्कृतिमा यसरी अर्को घरबार जोड्नु धेरै नौलो कुरा पनि थिएन । अनि फुपूले ‘तेरो मनले खाको‚ तँलाई बुझ्ने कोही छ भने तेरो मनको सुर गर् कान्छी । नातिनातिनीको चिन्ता नगर’ त भनेकै हुन् तर मलाई खै किन किन कसैकी स्वास्नी बनेर फेरि कसैका अधिनमा बस्ने रहर त्यसैत्यसै मरेर गयो । डम्बरेले मलाई वास्ता गर्दैन भन्ने जानेर म जता गयो उतै सिनो कुरेर बसेका गिद्धजस्ता लोग्नेमानिसहरूले फकाएकै हुन् । तिनीहरू कसैका आँखामा मैले मेराप्रतिको प्रेम अनुभूत गरिनँ बरू सबैका आँखाले मलाई भोग गर्ने लालसा देखाइरहेका हुन्थे । यसैले पनि मलाई फेरि कसैकी स्वास्नी हुने रहरभित्रैदेखि जागेन ।
संसार बदलिएजस्तै मेरो गाउँ पनि बदलियो । मानिसका आवश्यकता र आकांक्षाको सगरमाथा चुलिँदो थियो । मेरै पनि छोराछोरी हुर्केपछि तोकेको खर्चले पुग्न छोड्यो । के गर्ने होला ? म सुस्केरा हाल्थें । यस्तै दिन देखेर होला सायद फुपूले मलाई‚ ‘जान्छेस् भने जा । तेरा छोराछोरीको चिन्ता नगर, म बाँचुन्जेल म स्याहारूँला ।’ भनिन् र मैले साइप्रस उड्न बल पाएँ ।
दुई महिना कुरेपछि पासपोर्ट लिन जानुपर्छ भन्दै उही लालची मलाई सदरमुकाम जाऊँ भन्न आयो । एकचोटी पल्किसकेको झिल्के किन छोड्थ्यो र ? म फेरि दोस्रोचोटी उसकी रूपमती बनेँ ।
म उही मलाई भ्रष्ट पारी रूपमती बन्ने पथमा डोर्याउने आफन्त (अब किन आफन्त भनिरहुँ र त्यो त दलाल हो) ले हामीलाई यस मुलुकमा बँधुवा मजदुर बनाउन बेच्ने । हो त्यही दलालको साथ लागेर काठमाण्डु गुडेँ‚ पासपोर्ट उसले पहिल्यै मबाट लिइसकेको थियो । ‘तिम्रो भिसा आयो अब साइप्रस उड्नुपर्यो’ भनेर मलाई काठमाण्डु हिँडायो । छोराछोरीको जिम्मा फुपूले लिइन् । कलिला छोराछोरी छाडेर यता हिँड्ने बेलामा मेरो मनभित्र जे बित्यो, मेरी फुपू कसरी रोइन्, म कसरी रोएँ भनेर त्यस समयको चित्रण यहाँ गर्दा सबैले ओठ लेप्र्याउनेछन् । किनकि म त रूपमती बनिसकें; एउटी खराब आमा । यो अनुदार समाजले ठहर्याएकी एउटी खराब आमाबाट सन्तानको मायाले रुने हक पनि खोसिने रहेछ यहाँ । र त्यही समाजका साक्षी पाठकसँग बिचरीको भीख मागिरहेकी छैन म । म रूपमती हुँ र तपाईंहरू मेरो यही रूपलाई बुझ्नुस् र गालीको वर्षा गर्नुस्‚ म सन्तोक मानुँला । मलाई बरु कसैले कठै भनेर टिठ्यायो भने मन दुख्छ ।
यो कथाकार भनाउँदोलाई आफ्नो जिन्दगीको नसुल्झेको गुथ्थो फुकाइरहँदा मलाई आज साह्रै झिँझो लाग्यो । मैले बिर्सिसकेको अनि मेरो हुन नसकेको लोग्नेका बारेमा सोधेर लेखकले मेरो हुन सम्मन् चित्त दुखायो । तर म त यस लेखकसँग मन्त्रिएको भेडीजस्ती भइसकेकी छु । ‘भैगो लेखक‚ छोदिदेऊ’ भन्दा नि मलाई रुवाइरुवाइ उसले मौसमको बाबुले अचेल मलाई दिने पीडाहरू बकाइछोड्यो ।
अचेल डम्बरे दुबईमा काम गर्छ । दुबईमा पनि उसले अर्कै स्वास्नी राखेको छ अरे । मैले त पत्याएकी थिइनँ । एकदिन सौताले रूँदै र हारगुहार माग्दै फोन गरेकी थिई त्यसपछि त पत्याउनै पर्यो । ‘तँ ममाथि सौता पस्न आउँदा यो सोचिनस्’ भनी मुखभरीको गाली दिन मन लागेको थियो ।तर, मैले केही भनिनँ बरु रोइदिएँ ऊसितै । ‘कमाउन सकेछु भने तँलाई पनि हेरूँला । सासु अर्थात् फुपू मरिहालिन् । मेरा अल्लारे छोराछोरीहरू बिचल्लीमा परे । तँ पनि आखिर कान्छीआमा भए पनि आमै होस् । तिनीहरूलाई बिग्रिन नदिएस् । सकेको म हेरूँला’ भनेर सौतालाई सान्त्वना दिएँ । र फेरि हामी सौतासौता मुटु फुट्ने गरी सँगै रोयौं । यो नियतिको कस्तो खटन हो जसको हेला सहन नसकेर म‚ ‘यसको मुख जिन्दगीमा हेर्नुनपरोस्’ भनेर विदेश भासिएकी थिएँ । आज उसैले मसित सहायताको भीख मागिरहेकी थिइ । डम्बरे अब म र मेरी सौता दुवैको साझा शत्रु भएको थियो ।
मलाई यति सम्मनका हन्डर र ठक्कर खान बाध्य पारेर पनि डम्बरे ममाथि आफ्नो हक जताउन छोड्दैन । दुबईमा अर्कैकी स्वास्नीलाई स्वास्नी बनाएर बसेको छ ऊ । स्वास्नी नै भनेर किन राख्नुपर्ने रहेछ र यहाँ विदेशमा त । जे होस् रोजगारीमा दुबई पुगेकी कुनै आइमाईसँग जोइपोइजसरी सँगै बस्छ । अर्की भेटेपछि घरकी कान्छी र ऊबाट जन्मेका छोराछोरीलाई पनि हेला गर्न थालेको छ । अनेक अनेक फेक आइडी बनाउँछ र मेरो चरित्रको परीक्षा लिन्छ । साइप्रसका दुःखसुखले मलाई सिकाइसकेका छन् । जतिसुकै आइडी फेरेर अनि त्यसका साथी सङ्गतिलाई लगाएर मसित मेराभित्री कुरा खोतल्ने उद्योग गरे पनि त्यो डम्बरे नै हो भनी म खुट्याउछु र बघिनीसरी गर्जिन्छु र पनि ऊ हार मान्दैन‚ ‘त्यहाँ अनेक मोजमस्ती गरेर मसित सती सावित्री पल्टिन्छेस् । तिमीहरुको हैसियत हामीलाई था छैन र’ भनी तुस् मेट्छ । भन्न त मलाई पनि कति हो कति थोक मन लागेको हुन्छ । तर, ‘म तँजस्ती होइन । केही परिबन्दमा परेकी रै’छु भने पनि त्यसको पहिलो कारक तैँ होस् । तैंले पनि त्यस्तै कोही एउटी आइमाइलाई आफ्नी पियारी बनाई राखेको छस् अरे । कम्तिमा त्यसको सम्मानका निम्ति पनि तैंले मलाई गाली गर्न सक्दैनस् ।’ भन्छु तर ऊ मलाई अत्यन्त तुच्छ गाली गर्छ र म कुराकानी बन्द गरेर सिरकमा मुख छोपेर रुन्छु ।
यता शेखरको अतिसय यौन आसक्तिलाई म बुझ्न सक्दिनँ । न त यो ओडियासको आकर्षणलाई नै बुझ्न सक्छु । ओडियास बूढोले जति मेरो शोषण गरे तापनि मेरो व्यक्तित्व र मेरा इच्छाहरूको सम्मान गर्छ । उसले मलाई आजसम्म एकबचन पनि दुर्वाच्य बोलेको छैन । तर यो शेखर‚ यसले मलाई एक यौन प्यास मेटाउने साधनभन्दा बढ्ता कहिल्यै देखेन । ममाथि विजय पाएको पहिलो रात नै उसले मलाई तथानाम उपमा दियो । मलाई कति नरमाइलो लाग्यो लाग्यो त्यो कुरा कसरी व्यक्त गरूँ यहाँ ? त्यसबेला मलाई यस्तो दुःख लाग्यो कि, त्यस्तो दुःख त बरु मलाई डम्बरेले अर्की स्वास्नी ल्याउँदा पनि लागेको थिएन होला ।
मैले उसलाई जोखिम मोलेर आफ्नो छाप्रोमा बास दिएकी थिएँ । देख्दा पो छाप्रो थियो त्यो । तर त्यहाँभित्र शेखरले जीवनमै भोग्न नपाएको सुखसुविधाका सामग्री ओडियासले मलाई जुटाइदिएको थियो । ओडियास यति मनकारी थियो कि मलाई एयरकन्डिसनमा बस्ने सुविधा पनि थियो । त्यही छाप्रोमा बिरामी भएको शेखरलाई मैले आतिथ्य दिएकी थिएँ । उसको सुश्रुशा गरेकी थिएँ तर त्यस उरन्ठेउलाले त्यस कुराको सम्मान गर्न जानेन । मलाई आफ्नो ओछ्यान त बनायो बनायो । तर, त्यस कुराको आदर गर्न झनै जानेन । त्यसमाथि ऊभित्रको वासना बेला न कुबेला जागिरहन्छ । म यायालाई सेवा गर्न बसेको बेलामा ऊ मलाई कल वा म्यासेज गर्छ र सिधै छाडा शब्दमा उसको चाहना जनाउँछ र अहिल्यै आउँछु भन्छ । मैले इन्कार गरेँ भने ‘सुड्डी‚ ज्यादा भोलिभोलि बन्ने होइन । म पाँच मिनेटमा त्यहाँ आएर मिस कल गर्छु, ढोका खोलिनस् भने तँलाई जान्या छु’ भन्छ । म यायासित टाउको दुखेको बहाना गरेर उनलाई छोडेर आउनुपर्छ र चुपचाप उसको ओछ्यान बनिदिनुपर्छ । कहाँबाट के-के हेरेर आएको हुन्छ कुन्नी‚ क्रिडाका बखत यस्ता वाक्वाकी छुट्ने काम गर्न लगाउँछ कि म भन्नै सक्दिनँ ।
उसको यस्तै बेहोराले अचेल मलाई आइतबारे छुट्टिमा पनि लिद्रातिर जान मन लाग्न छोडिसक्यो । बेकामे मोराहरू सबै सोलोमस बस टर्मिनलतिरै क्यान बियर समाएर ढुकिबसेका हुन्छन् । शेखर नाउँ गरेको मेरो जीवनको धब्बाले मेराबारेमा चारैतिर प्रचार गरिसकेको छ । अस्ति त लिफ्थेरिया स्क्वायरबाट माथि म्युनिसिपल हलतिर जाँदैगर्दा एकजना केटाले लाजै नमानेर‚ ‘आफू त शेखरकी सुड्डी हो रे नि । हाम्लाई पनि चान्स मिल्थ्यो कि कहिलेकाहीँ ?’ भन्यो । जुत्ता फुकालेर‚ ‘ला तँलाई यही हो चान्स’ भनेर मुखैमुखमा बजाइदिम् जस्तो लागेको थियो । साथमा खीलकुमारी थिई‚ बाजा लागे आफ्नै बेइज्जत होला भन्ने पिर; सुन्या नसुनेझैं गरेर हिँड्यौँ । ऊ अनेक अश्लिल फलाक्दै थियो अनि उसको साथमा भएकाहरू अट्हास गरेर हाँस्दै थिए । मैले कान थुनेँ र माकारियोस स्ट्रिटतिर भागेँ ।
मलाई भयङ्कर बाधा दियो यो उरन्ठेउलाले । मैले सहँदै आएको हो तर अब धैर्यको बाँध टुट्यो । कल गरेर भक्कुमार गाली गरें । ऊ आफ्नो दोष किन पो देख्थ्यो र‚ ‘तैँ त हो नि मलाई पल्काउनी’ भन्यो सिधै ।
थुइक्क बज्या‚ म असहाय बन्छु र कराउँछु‚ “तैँ भिखारीको औलादले खान पाइनँ‚ काम पाइनँ भनिस् र एकछाक भए नि खाएर मरोस्‚ गति परोस् भनेर लिएर गएँ‚ तर मैले भुल गरिछु ।
‘मलाई ज्यादा कुरा थाहा छैन । अचेल मेरो गर्लफ्रेन्डको पनि काम छैन । खुरूक्क भोलि पचास युरो मलाई दिनी‚ होइन भने मैले जान्या छु’‚ भनेर ऊ फोन डिसकनेक्ट गरदिन्छ ।
‘थुइक्क‚ यसकी अझै अर्की पनि गर्लफ्रेन्ड छ ? मुसाले जस्तो कतिवटी स्वास्नी भेला गर्छ यो तीखे बाहुन ? लिद्राहुँदो गएर दिनैभरि बियरमात्रै पिइबस्दा ज्यान सुकेर बाँसको भाटासरि भइसक्यो । यस्तालाई पत्याउने गर्लफ्रेन्ड कस्ती हुन्छे ? मैजस्ती ?’
मेरो अस्थिर मनोदशासित मेरी याया परिचित छिन् जस्तो लाग्छ । सोधिरहन्छिन्‚ ‘गोरीमु तँलाई के भयो ?’ घरव्यवहारका दुःख देखाउँछु । शेखर नाउँ गरेको ग्रहण लागेको छ । तेरो छोरा ओडियासले मेरो यो चाल थाहा पायो भने मेरो के दुर्गति पार्ला भनेर कसरी भनुँ यो वयोवृद्ध आमैलाई ।
यस काण्डपछि मलाई साइप्रसमा बस्ने नेपाली ब्वाँसा केटाहरूका फेक रियल अनेकथरि आइडीबाट भद्दा शब्दले सम्बोधन गरिएका सन्देशहरू आइरहन्छन् । तर एउटा बिन्दुमा पुगेपछि मानिसलाई चोट दिने उही कुरा पनि सामान्य लाग्दो रहेछ ।
भोलिपल्टै शेखरले मलाई भन्यो- ‘पचास युरो दे ।’ मैले पनि‚ ‘दिन्नँ जे गर्छस् गर !’ भनेर अड्डी कसेँ । ल कुरा गर् भनेर उसले अर्कैलाई फोन थमाइदियो । आवाज कोही अपरिचित केटीको थियो । सुरुमा त उसले‚ ‘दिदी‚ हामी विद्यार्थी भिसामा आएका केटाकेटी‚ काम नपाएर तनाव छ । सापटी भए नि दिनुस्’ भनेर राम्रै कुरा गरी । तर जब मैले इन्कार गरेँ अनि एक्कासी भड्किई‚ ‘साला मगरनी‚ कलिला कलिला केटा रोजेर तेरो प्यास बुझाउनी अनि उनीहरूका खाँचोहरू पूरा नगरिदिनी ? तैंले मेरो ब्वाइफ्रेन्डलाई लालच देखाउँदै आफ्नो घरमा लगेर तेरो इच्छा पूरा गरेकी हैनस् ? खुरुक्क दिन्छेस् कि भन्डाफोर गरिदिऊँ ?’
यति त भइनै सक्यो अब के भन्डाफोर बाँकी छ र । कुन आँटले मैले भन्न सकेँ ‘नाइँ’ नत्र भने यसअघिसम्म शेखरले मलाई फकाएर होस् कि धम्क्याएर होस् मागेको रकम हात लाएरै छोडेको थियो ।
यसको दुईचार दिनसम्म मलाई हाइसुक्ख भयो । जिन्दगीमा कहिल्यै भोग्न नपाएको शान्ति अनुभव गरेँ । तर मलाई थाहा थियो त्यो कुटिल केटो त्यतिकै चुप लाग्नेवाला छैन । कुनै न कुनै षड्यन्त्रको तानाबाना त्यसले मेराविरुद्ध बुनिरहेकै छ भनेर । तर पनि कम्तिमा एकसाता मैले शान्ति सुविस्तासित बस्न पाएँ । तर मेरा भाग्यमा कहाँ सुखचैन लेखिएको छ र; उताबाट एकदिन सौताले रुँदै र कहालिँदै फोन गरी ।
फोन काटिरह्यो काटिरह्यो । हजारचोटी कोसिस गरेपछि बल्लतल्ल उठायो र भन्यो- ‘साइप्रसमा कतिवटा नाठा खेलाऊनू पुगेको छैनन् र उतै समुद्रमा डुबेर मर्नू । मलाई तिम्रो मुख हेर्नु परेको छैन ।’
‘दिदी तिम्रा बारेमा डम्बरेले मौसमलाई के-के भनेर कान भरिदियो । आमा मेरा निम्ति मरिन् भन्दै गाउँगाउँ फलाक्दै हिँडेको छ । मैले सम्झाउने कोसिस गरेँ । उल्टै मलाई ‘तिमी सम्पै आइमाइहरू उस्तै हौ’ भन्यो । मलाई पनि असह्य भयो । ‘तेरो बाउ उस्तो कि हामी ? अर्काकी स्वास्नी च्यापेर विदेशमा कमाको जत्ति उडाउने उस्तो कि म घर सम्हालेर बस्ने ? कि तिमीहरूको सुखका निम्ति उति टाढा पुगेकी तेरी आमा ?’ भनेर हप्काएँ । उल्टै ममाथि जाइलाग्यो । ‘तिमी सप्पै उस्तै हौ । तिमीहरू उस्तै भएकाले मेरा बाउले दुईटी तीनटी स्वास्नी ल्याउनु परेको’ भन्दै हिड्यो । ‘बहिनीलाई पनि बेस्मारी कुटेछ ।’
मलाई भनन चक्कर छुट्यो । ‘के डम्बरेको रगतले मलाई त्यसै भनेको हो त ?’ पत्याउनै सकिनँ । उसलाई सम्पर्क गरेँ । फोन काटिरह्यो काटिरह्यो । हजारचोटी कोसिस गरेपछि बल्लतल्ल उठायो र भन्यो- ‘साइप्रसमा कतिवटा नाठा खेलाऊनू पुगेको छैनन् र उतै समुद्रमा डुबेर मर्नू । मलाई तिम्रो मुख हेर्नु परेको छैन ।’
बस् मलाई पुग्यो । डम्बरेले धोका दिए पनि त्यसको अंश त मसित छ भन्ने लागेको थियो । त्यसले पनि बिदा दियो मलाई । म बली हुनुको विकल्प थिएन । रुँदारुँदै मैले कति दिन यायाको स्याहारमा हेलचेक्र्याइँ गर्ने ? यस्तै पारा रहिरह्यो भने मलाई ओडियासले निकाल्न बेर छैन कामबाट । यस्तै मनमा गुनेर यायाको स्याहारमा लागिरहेँ । शेखरले दश बाह्र चोटी फोन गरेको रहेछ म्यासेन्जरमा‚ नउठेपछि मोबाइलमा कल गर्यो र भन्यो- ‘अस्ति अस्तिको लागि सरी सुड्डी । म आज आँउछु है ।’ सहिनसक्नु भएको थियो, मैले मुख छाडेर भनेँ- ‘साला गधा जा न तेरै गर्लफ्रेन्डसँग । मिल्थ्यो भने म तेरो खुन पिउथेँ ।’
फोन काटिदिएँर म काममा लागेँ । तर साँझको पाँचजति बजेको हुँदो हो फेरि फोन गरेको गर्यै गर्यो । ‘आज म यसलाई घाँटी निचोरेर मार्छु’ भन्दै फोन उठाएँ । ऊ त अझै निर्धक्क भएर भन्छ- ‘म गेट बाहिर छु ढोका खोल् ।’
गेट खोलिहेर्दा ऊ दुवै हातले कान समाएर उभिएको हुन्छ । किन गाईजात्रा देखाउनु भन्ने लागेर भित्र लान्छु । ऊ रोएको नाटक गर्छ । गर्लफ्रेन्डले छोडी भन्छ । के-के भन्छ भन्छ म त्यस बैगुनी बाहुनका कुराले बहकिन्छु । तर जे भए पनि म आज यसकी ओछ्यान बन्दिनँ भन्ने कुरामा दृढ हुन्छु र गैहाल्न भन्छु किनभने शनिबारको दिन ओडियास जतिबेला पनि आउनसक्थ्यो त्यसमाथि रात पर्नै लागेको थियो । ऊ रोएको अभिनय गर्दै मलाई ओछ्यानमा तान्नखोज्छ‚ म झट्कारेर फुत्किन्छु र याया बस्ने घरतिर लाग्छु । एकैछिनमा ऊ म्यासेज पठाउँछ‚ ‘म रात यही बस्छु मलाई पनि खानेकुरा लेराउनू ।’
म भन्न केही नसकी थुचुक्क बस्छु । बिचरी ! याया सकिनसकि ओछ्यानबाट उठेर ‘के भयो गोरीमु’ भन्छिन् । म चक्कर आयो भनी ढाँट्छु । ओडियास आउँछ र आज खास काम भएकोले गैहाल्ने कुरा बताउँछ । म एकदमै राहत अनुभव गर्छु । कम्तिमा ओडियास गैदियो मात्रै भने पनि म त्यस लुच्चो लफङ्गालाई स्कूपाले हानेर भए पनि लखेटी पठाउँछु । घिच्न नपाएको भए घिचेर जावोस् त्यो डाका । ओडियास घरबाट निक्लेपछि यायाले पनि मलाई‚ ‘जा अघि चक्कर लाग्यो भन्थिस् । अब आराम गर् । म पनि सुत्छु’ भन्छिन् । म तैयारी खानेकुरा बोकेर आफ्नो छाप्रोमा पस्छु ।
उ हाँग्राले पाँग्रा खाएसरी मैले लगेको खानेकुरा हसुर्छ । मलाई एक वचन खान्छेस् वा खाइस् कि खाइनस् भनेर पनि सोध्दैन । म आफ्ना लागि कफी बनाउँछु । त्यो पनि खोस्छ । म घर जा भन्छु । ऊ नजाने भनि अड्डी कस्छ । म हात तानेर घिच्याउँछु । मरन्च्याँसे भएर के गर्नु कति बलियो हो यो ? उल्टै मलाई खाटमा तान्छ । म ऊमाथि हुत्तिन्छु । मौका कुरेको गिद्धले मलाई जोडले अँठ्याउछ । यसअघिका रूपमतीमा रूपान्तरण हुँदाका बखत मैले आत्मप्रतिरोध गरे पनि शारीरिक प्रतिरोध त्यति जोडबलले गरेकी थिइनँ तर आज मेरो नारी स्वाभिमान जागेको थियो म भयङ्कर प्रतिकारमा उत्रिएँ र लात्ती मुड्की जता पायो त्यतै वर्षाउन थालें । ऊ मलाई फकाउने‚ गलाउने‚ तर्साउने सबै उपाय अपनाउन थाल्यो । मेरो केही सीप लागेन र म आत्मसमर्पण गर्न बाध्य भएँ । ऊ विजयी भावले ममाथि जङ्गली‚ असभ्य र अराजक पाराले हावी भयो ।
अचानक मूलद्वार खुलेको सुनेँ र तत्कालै कार भित्रिएको पनि ।
के ओडियास फेरि फर्किएको हो ?
गाडी भित्रिने बाहिरिने मूलद्वार स्वचालित हुनाले कसैले भित्रबाट खोल्नबन्द गर्न जानुपर्ने झन्झट थिएन । जब ओडियास आउँथ्यो कारबाटै रिमोट थिच्थ्यो र गेट आफैं खुल्थ्यो अनि बन्द हुन्थ्यो । हे भगवान्, यो के भएको हो ? मैले शेखरलाई आफूबाट हटाउने कोसिस गरेँ तर ऊ त उत्तेजनाको टुप्पोमा पुग्नै लागेको थियो । घड्याम्म ढोका खोलेर ओडियास मेरो छाप्रोभित्र पस्यो । शेखरलाई घर फिर्ता गर्ने कोसिसमा मैले ढोकामा चुक्कुलै लगाएकी रहिनछु अनि बत्ति निभाएकै थिएन । अब छोप्न र लुकाउन बाँकी केही थिएन ।
नकच्चरो शेखर दुइहातले लाज छोपेर बसेको थियो । मैले छेउको ब्ल्याङ्केट तानेर आफूलाई ढाकेँ । ग्रीक भाषामा ओडियासले ‘बहुत राम्रो’ भन्यो र शेखरतिर हेरेर‚ ‘किन रोकिइस् ? काम जारी राख्’ भन्यो अङ्ग्रेजीमा ।
र अन्तमा त्यो कालो शनिबारे रातको श्रृङ्खला पनि शुरु भएरै छाड्यो । हामी दुई रूपमतीले सँगै मिलेर शेखर र ओडियासलाई देहसुख प्रदान गर्यौँ र गरिरहेका छौँ । यी वासनाले अन्धा भएका ब्वाँसाहरू तिनको रहर मेटिइसकेपछि कोल्टे फर्केर घुर्न थाल्छन् र हामी दुई रूपमती आ-आफ्नो नियतिलाई सराप्दै एकअर्काको अङ्गालोमा भक्कानिई भक्कानिई रुन्छौँ ।
शेखर उठेर भाग्न खोज्यो । तर बलिष्ठ ज्यान भएको ओडियासले उसलाई च्याप्प पक्रियो र अङ्ग्रेजीमा बोल्न लाग्यो । यायाको सङ्गतले मैले चाँडै आफूलाई ग्रीक भाषामा अभ्यस्त पारेकी थिएँ । तर, यो अङ्ग्रेजी भन्ने जेमराज भाषा भने ज्यान जाला मैले सिक्न सकिनँ । मौका यही हो भनेर म याया बस्ने घरतिर भाग्न खोजेँ । तर ओडियासले चुक्कुल लगायो र एक बेतोडको पन्च मेरो गालामा मार्यो । तर शेखरसित भने कुरा जारी राख्यो । उसले के भन्यो कुन्नी शेखर ओडियासकै सामु फेरि मतिर जाइलाग्यो । मैले प्रतिकार गरेँ । यसपटक ओडियासले मतिर हेरेर ग्रीक भाषामा भन्यो‚ ‘तैंले अघिकै काम यो केटासित जारी राखेर मलाई खुसी पार्ने कि भोलि बिहानै भिसा क्यान्सिल गराएर यो केटो र तँ हातमा हत्कडी लागाएर नेपाल फर्किने ?’ उसको आवाज यति कठोर र निर्णायक थियो कि रुनु र माफी माग्नुसिवाय मसित उपाय केही थिएन । मैले हात जोरेर बिन्ती गरेँ । के गरूँ कि के गरूँ भएको शेखरलाई ओडियासले फेरि इसारा गर्यो र शेखर फेरि सक्रिय भयो । अब प्रतिकारको कुनै अर्थ थिएन ।
म जिउँदो लास भइसकेकि थिएँ र पनि केही लाज भने बाँकी नै रहेछ; मैले आफू र शेखरमाथि बर्को ओढाउन खोजें ।
‘ओही रे (पर्दैन)’ भन्दै ओडियासले त्यो परै मिल्काइदियो ।
ए कथाकार मलाई तिमीसँग यही कुराको गुनासो छ । अब त तिमीलाई घृणा गर्ने भएकी छु म । मैले त तिमीलाई यस्तोसम्मको जीवन मैले बाँच्नुपर्यो भनी सुनाएकी हुँ‚ न कि यसको अध्योपान्त व्याख्या गर भनी अह्राएकी । तर तिमी भन्छौ‚ ‘रूपमती यहाँ यही पढ्न‚ सुन्न र हेर्न मानिसहरू व्यग्र छन् । मैले सक्दो कोसिस गरेर यसलाई यौन साहित्य हुनबाट जोगाएको छु । मेरो कलमको टुप्पोको खुबीअनुसार कथामा आफ्नो चरित्र स्थापित हुनदेऊ ।’ तिमीले जित्यौ लेखक मैले हारेँ । हारेरै त मैले यहाँसम्म तिमीले रचेको कथानकलाई चुपचाप सुनिरहेकी छु । अझै सुनाऊ त्यस रात ममाथि केके आइलाग्यो ।
जब शेखरको हड्डी गल्यो र ऊ ममाथि लमतन्न पसारियो । ओडियासले कुराकानीलाई अङ्ग्रेजीमा अघि बढायो । तिनीहरूले निकैबेर कुराकानी गरे । त्यसरात ओडियासले शेखरलाई एक सय युरोले पुरस्कृत गरेर बिदा दियो । भयङ्कर ग्लानीका बीच पनि मैले ओडियासले शेखरलाई किन त्यत्रो पैसा दियो भनेर छक्क परेर हेरेँ । त्यो त नेपालको तेह्र चौध हजार रूपियाँ हो ।
शेखर बाहिरिएपछि ओडियासले मलाई ग्रीकमा भन्यो- ‘तँलाई मैले सबै सुखसुविधा दिएकै थिएँ । तर त्यतिले मात्रै तँलाई पुगेनछ । ठीकै छ म केही भन्दिनँ । तर तैंले अबदेखि मैले भनेअनुसार गर्नैपर्छ । मानिनस् भने तँ र तेरो पठ्ठोले तत्कालै साइप्रस छोड्नुपर्ने हुन्छ वा म तिमीहरूलाई चोरी वा कुनै अपराधको आरोप लगाएर वर्षौंसम्म सडाइदिन्छु ।’
‘ती ना कानो‚ मास्त्रो ? (के गर्नुपर्ने हो मालिक ?)’ म डराइडराइ ग्रीक भाषामा सोध्छु । ‘तिमीहरूले गर्नुपर्ने काम मैले शेखरलाई राम्रोसित सम्झाएको छु । मैले अहिल्यै शेखरको पासपोर्टको कपि पनि मेरो मोबाइलमा ट्रान्सफर गरिसकेको छु । तिमीहरूले चलाखी गर्नुको कुनै अर्थ छैन ।’ यति भनेर शेखरले गिजोलेर थिलोथिलो पारेको मेरो मृतप्राय ज्यानमाथि दैत्याकार शरीर भएको ओडियास खप्टिन्छ ।
भोलिपल्ट शेखरको फोन आउँछ । म कुनै उत्सुकताबिना उसको फोन उठाउँछु । उताबाट ऊ भन्छ- ‘सुड्डी मैले आफ्नी गर्लफ्रेन्डलाई मनाइसकेँ । तँ पनि मान् है ।’
‘के मनाइस् तैंले ?’ मेरो बोली फुत्किन्छ ।
‘यस्तै हो सुड्डी परदेशमा कसले कसको मतलब गर्छ र । ओडियासले भनेको छ अबदेखि हरेक शनिबार शनिबार तँ‚ म र मेरी गर्लफ्रेन्ड अनि तेरो सुगरड्याडी त्यही ओडियास मिलेर सँगै रमाइलो गर्नी अरे । त्यसो गरेबापत् ओडियासले हामीलाई एकसय युरो दिन्छ अरे । हिजो एड्भान्स भनेर एक सय युरो दिइसक्यो, देखिनस् ।’
‘तँलाई चाहिएको त्यही थियो होइन खाते ?’ म आक्रोसित हुन्छु ।
‘चुप लाग्‚ मेरी गर्लफ्रन्डले त मानिसकी भने तँ कुन ड्याङ्की मुली होस् । धेरै साध्वी बन्ने नाटक गर्नुपर्दैन । शनिबार म गर्लफ्रन्ड लिएर आउँछु । अँ सुन् तँलाई तेरो छोराले आजसम्म केही भनेको छैन ? मैले त उहिल्यै सुनाइद्या हो त त्यसकी आमाको कर्तूतहरूजति सबै ।’
म छाङ्गाबाट खसेसरी हुन्छु । टेकेको संसार सबै भास्सिएजस्तो लाग्छ । यो यतिसम्म पतीत होला भन्ने मैले सोचेकी थिइनँ । तर, यो त मेरो लोग्ने भनाउँदो डम्बरेभन्दा कता हो कता कुरूप रै’छ ।
र यो श्रृङ्खला युगौंयुग चलिरहनेछ जबसम्म हामीजस्ता कलसीकुमारीहरूलाई रूपमती बनेर यस बिरानो मुलुकमा धाउनुपर्ने वाध्यताको अन्त हुनेछैन ।
पदम विश्वकर्माको ‘क्वारेन्टाइन’ लोकार्पण
पद्मश्री साधना सम्मानबाट भजनशिरोमणि आचार्य सम्मानित
उपसभामुख जसपाको भागमा, चयन प्रक्रिया चाँडै थालिने
बाँस्कोटाको कविता संग्रह ‘ढुङ्गाको प्रेम’ लोकार्पण
लेखक पराजुलीको ‘मिथ्या’ सार्वजनिक
यस वर्षको नोबेल साहित्य पुरस्कार गुर्नहलाई
यी हुन् पछिल्लो १५ वर्षका नोबेल साहित्य पुरस्कार विजेताहरु